लकडाउनले रोजगारी खोसियो ? अब अनलाइनबाट यसरी पाईन्छ नेपालमै काम - News & Entertainment
गृहपेज » जागिर »
लकडाउनले रोजगारी खोसियो ? अब अनलाइनबाट यसरी पाईन्छ नेपालमै काम
काठमाडौं । कोभिड–१९ संक्रमणका कारण देश विदेशमा रोजगारी नै गुम्ने अवस्था आएकाहरुलाई खुसिको खबर छ । युकेएआईडी र नेपाल सरकारसमेतको सहकार्यमा त्यसरी रोजगारीमा समस्या परेकालाई स्वदेशमै रोजगारी दिने उद्देश्यसहित बिहीबारदेखि नयाँ कार्यक्रमको थालनी हुँदैछ ।
यसका लागि रोजगारी खोजी रहेका व्यक्तिले रोजगारी डटकममा क्लीक गरेर आफ्नो क्षमता अनुसारका काम खोज्न सक्छन् । अर्थमनत्री डा। युवराज खतिवडा र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवले आज ११ बजे संयुक्त रुपमा उद्घाटन गर्ने यो अभियानमा रोजगारीसहित तालिम र स्वरोजगार समेत उपलब्ध गराउने सुविधा प्रदान गरिएको छ ।